२३ वर्षे युवकले गरे ९१ वर्षीया महिलासँग बिहे, अहिले भयो हंगामा - Taja Khabar
अर्जेन्टिनाका २३ वर्षीय युवक मौरिसियो ओसोलाले हजुरआमा नाता पर्ने ९१ वर्षीया महिला योलान्दा टोरेससँग बिहे गरेकोमा अहिले कानूनी समस्या आएको छ । खासमा मौरिसियाले योलान्दासँग सन् २०१५ मा बिहे गरेका थिए ।
अहिले योलान्दाको मृत्यु भइसकेको छ । मौरिसियोले पत्नीको निधनपछि पेन्सनका लागि निवेदन दिए । तर यो मुद्दा अहिले अदालतमा पुगिसकेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार, मौरिसियोले फाइदाका लागि मात्र योलान्दासँग बिहे गरेका हुन् । योलान्दा अघिल्लो वर्ष घाउ सडेपछि बितेकी थिइन् । सामाजिक सेवा अधिकारीहरूले मौरिसियोको विवाहका बारेमा छिमेकीहरूलाई सोध्दा उनीहरूले केही थाहा नपाएको बताए ।
स्टेट रिटायरमेन्ट फन्डले ओसोलोलाई विधुरले पाउने पेन्सन दिन अस्वीकार गरेको छ । उनीहरूको वैध तरिकाले बिहे नभएको फन्डको तर्क छ । ‘मैले योलान्दालाई पवित्र प्रेम गरेको थिएँ र उनलाई गुमाउनुपर्दाको पीडाले मलाई जीवनभर सताउनेछ,’ ओसोलाले भने । तर ओसोलाको यो भनाइका बाबजुद अर्जेन्टिनाको नेसनल एड्मिनिस्ट्रसन अफ सोसियल सेक्युरिटीले उनको पेन्सन निवेदन अस्वीकृत गरिदियो ।
‘योलान्दाले मलाई आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न जोड दिएकी थिइन्,’ ओसोलाले भने, ‘हाम्रो बिहे एक वैध निर्णय थियो । उनले मेरो जीवनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेकी थिइन् र उनको अन्तिम इच्छा म जसरी भएपनि पूरा गर्छु । म पेन्सनका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पुग्न सक्छु ।’ ओसोलाले मुद्दा जित्ने सम्भावना छ किनकि यस्तैखाले अर्को मुद्दामा १० वर्षअघि २४ वर्षीय रेनाल्दो वाबेकेले ८२ वर्षीया अडेल्फा भोल्पेससँग बिहे गरेका थिए । त्यतिखेर वाबेकेले कुनै पनि समस्याविना नै राज्यले दिने पेन्सन पाएका थिए ।
यिनी संग छन आधा मिटर लामोे यौनांग, सुत्नका लागि छुट्टै सिरानी (तस्बिर सहित)
७ वटा बार मध्ये कुन बार जन्मिएका मान्छे ले कति धन कमाउछन् ? हेर्नुहोस आफ्नो भाग्यपरिक्षा !
मलेसियाले नेपाललाई दियो यस्तो झट्का : नेपाली युवाको मलेसिया रोजगारी मा पुर्णबिराम !…
खोला किनारमा भेटियो अनौठो चमत्कारीक शिवमूर्तिको ! एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर दर्शन…